नवराज कुँवर काठमाडौं, १९ फागुन
आज जुत्ताको चर्चा गरौँ । यतिबेला जुत्ताबारे लेख्नु, बोल्नुको अर्थ नै विशेष छ । किनकि, जुत्ता र यसको प्रयोगमा अदलबल भएको छ । पहिले व्यक्तिगत जीवनमा मात्र प्रयोग हुने जुत्ता अब राजनीति र कूटनीतिमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ ।
खुट्टाको सुरक्षादेखि लिएर मनको शान्ति र आक्रोश मत्थर पार्नेसम्ममा जुत्ताको प्रयोग हुन थालेको छ ।
अब जुत्ताविनाको जीवन के जीवन ! चप्पल, स्याण्डल, खराउ आदि जुत्ताकै भाइ र बहिनी हुन् । यी सबैले हाम्रो जीवनमा अर्थ राख्छन् ।
हामीले जुत्तालाई फरक सन्दर्भ र काममा फरक तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छौँ । घरभित्र एउटा, बाहिर अर्को, नुहाइधुवाइका लागि अर्कै । २५–३० वर्ष अगाडिसम्म जुत्ता–चप्पलको महत्त्व छुट्टै थियो । उतिबेला जुत्ता खुट्टा जोगाउन र मौसम वा वातावरणअनुसार सुरक्षित हुन मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो । हिजोआज जुत्ताको प्रयोग गोलमडोल भएको छ ।
समयसँगै जुत्ताको प्रयोग पनि बदलिएको छ आज । सम्मान र अपमान दुवैमा यसको आवश्यकता पर्न थालेको छ । कसैलाई जुत्ताले प्रहार गर्नु वा जुत्ताको माला भिराउनु अपमानको चरम प्रतीक बनेको छ ।
रामायणमा भरतले श्रीरामको खराउ सिंहासनमा राखेरै १४ वर्षसम्म राजकाज चलाएको उल्लेख छ । श्रीकृष्णले पनि एक पटक द्रौपदीको चप्पल सजाएर राखेका थिए, जसका कारण भीष्म पितामहसँग उनको भेट कसैलाई थाहा भएन ।
हिजोआज विवाहमा सालीले भिनाजुको जुत्ता लुकाउनु परम्परा जस्तै बनेको छ । यसपछि छेडछाड, जिस्काजिस्की र लेनदेनका लागि हुने सौदाबाजी हेर्नलायक हुन्छ । ठूलाबडा यसलाई ‘केटाकेटीको रमाइलो’ भनेर नजर घुमाउँछन् ।
यो परम्परा कहिले र कहाँ सुरु भयो, यो खोजको विषय हो तर लाग्छ, यो राष्ट्रव्यापी बन्दै छ, जसले जुत्ताको महत्त्व झनै बढाउँदै लगेको छ । जुत्ता पाउनका लागि त्यो जुत्ताभन्दा महँगो कुरा दिएर भिनाजुले साली फकाउनुपर्छ । यसको अर्थ, जुत्ता अब जुत्ता मात्र रहेन, इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्न पुगेको छ ।
हुनत यो कुरा हामीले हिन्दी सिनेमा ‘धड्कन’का नायक सुनिल सेटीबाट उहिल्यै थाहा पाइसकेकै हौँ । राम्रो जुत्ता लगाएर माग्न गएका भए सुनिलले शिल्पालाई पाउने थिए । अक्षय कुमारसँग राम्रो जुत्ता थियो, शिल्पालाई उनैले लगे ।
खैर, चुरो कुरातिर लागौँ । जुत्ताले राजनीतिसँग पनि सम्बन्ध बढाएको छ । अर्थात्, जुत्ता र राजनीतिबीचको सम्बन्ध पनि हिजोआज झाँगिएको छ । नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी भारतदेखि युरोप अमेरिकासम्मको राजनीतिमा जुत्ताले आफ्नो महत्त्व स्थापित गरिसकेको छ ।
राजनेताहरूले जिन्दावाद र मुर्दावाद तथा फूलको मालासँगै कहिलेकाहीँ जुत्ताको माला पनि पाउँछन् अचेल । सभा, सम्मेलन तथा भेटघाट कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्वमाथि जुत्ता प्रहारका घटना नेपालमा पनि बेलाबेला हुने गरेका छन् । जुत्ता हानिने नेताको त त्यसै चर्चा हुन्छ नै, यसबाट जुत्ता हान्नेको पनि उत्तिकै चर्चा हुन्छ ।
आइतबार मात्र हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग जुत्ताले साइनो गाँसेको छ । वास्तवमा त्यो जुत्ता रतन तिरुवा नामका व्यक्तिले लगाएका थिए । राष्ट्रिसभा गृहमा प्रचण्डलाई देख्नेवित्तिकै रतनमा आक्रोश जागृत भयो ।
उनमा किन आक्रोश जाग्यो, त्यो उनको कुरा भयो । त्यो आक्रोश पोख्न उनले जुत्ताको प्रयोग गरे । अन्ततः १० वर्षे सशस्त्र युद्धका ‘नायक’सँग जुत्ताले सम्बन्ध स्थापित गरेरै छाड्यो ।
त्यसो त विश्वका धेरै राजनेतासँग साइनो जोडिसकेको जुत्ताका लागि ‘जम्मा’ ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिने प्रचण्डसँग साइनो जोड्नु खासै ठूलो कुरा होइन बरु प्रचण्ड निराश होलान्, किनकि उनले ‘जुत्ताको समाजशास्त्र’ बुझ्नै बाँकी छ । बुझेका भए नरिसाउनुपर्ने हो ।
अमेरिकादेखि चीन र इरानका राष्ट्रपतिसम्म जुत्ताको विशेष साइनो छ । सन् २००८ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस र २०१४ मा अमेरिकाकी पूर्ववदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनसँग जुत्ताले साइनो गाँस्यो । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहदेखि गृहमन्त्री पी. चिदम्बरसम्मलाई थाहा छ जुत्ताको महत्त्व ।
केही नेताको राजनीतिक करियर नै जुत्ताले चम्काएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म कुनै पार्टीले जुत्ता चुनाव चिह्न लिएका छैनन् । तर, राजनीतिमा असम्भव केही छैन भनिन्छ, त्यसैले कुनै पार्टीले भोलिका दिनमा जुत्ता चुनाव चिह्न नलेलान् भन्न सकिँदैन ।
जुत्ताको मीठो उपयोग पनि हुँदो रहेछ । यसको प्रमाण इजरायल हो, जसले सबैको मुखमा जुत्ता हानेको थियो । एक पटक जापानका सम्राट पत्नीका साथ इजरायल गएका थिए । इजरायलका प्रधानमन्त्रीसँग रात्रिभोज गरेपछि अन्तिममा सबैलाई मिठाई दिइयो, जुन जुत्तामा थियो । तर, त्यो जुत्ता चकलेटबाट बनाइएको थियो । त्यसैले पहिले सबैले त्यसमा राखेको मिठाई र पछि जुत्ता पनि खाए । मीठो चिज कसले छाड्ने ! यसरी इजरायलले राजालाई समेत जुत्ता खुवायो ।
अर्को रमाइलो घटना पनि छ, जो भारतको हो । एक अंग्रेजलाई पञ्जाबमा मकैको मोटो रोटीमा साग राखेर खान दिइयो । उसले रोटीलाई प्लेट सम्झियो र साग खाएर प्लेटचाहिँ फिर्ता गरिदियो । इजरायली प्रधानमन्त्रीको कुनै भान्छे त्यहाँ हुन्थ्यो भने कम्तीमा त्यो अंग्रेजलाई प्लेटको महत्त्व त सम्झादिन्थ्यो ।
इजरायलमा भएको घटनापछि धेरै जापानी नागरिकले दुःख व्यक्त गरे । नेपालको जस्तै जापानमा पनि जुत्तालाई भान्छा र पूजा कोठाबाट टाढा राखिन्छ । तर, आफ्ना राजालाई इजरायलीले मिठाई नै जुत्तामा राखेर खुवाए ।
उक्त घटनासँगै राजनीतिपछि कूटनीतिमा पनि जुत्ताले ‘इन्ट्री’ मार्‍यो । लगाउने मात्र होइन, आक्रोश पोख्ने, खुसी हुनेदेखि मेजमानसम्ममा त जुत्ता पुगिसक्यो, अझै कहाँकहाँ पुग्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
अर्को कुरा, वास्तवमा जुत्ताले आफैँ कहिल्यै यात्रा गर्दैन । यो व्यक्तिको यात्राको क्रममै सीमित हुन्छ । तर, जब मान्छेले यात्रा पूरा गर्छन्, तब जुत्तालाई ढोकाबाहिरै छाडिदिन्छन् ।
त्यही जुत्ता, जसले मान्छेको खुट्टा बचाउन कहिले आची कुल्चिनुपर्छ त कहिले बबल्गम । तर, मान्छेबाट उसले माया पाउँदैन ।
लाग्छ, मान्छेबाट अपमानित भएकाले जुत्ता पनि आन्दोलित बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा त अझ ‘समानता’, ‘समता’, ‘स्वतन्त्रता’ र ‘अधिकार’का चर्कै कुरा गर्ने कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा यो बढी सलबलाउन थालेको छ ।
सायद जुत्तालाई थाहा हुनुपर्छ, शोषित–पीडित जुर्मुराउने कम्युनिस्ट सरकार भएकै बेलामा हो ।
अनि व्यक्तिका खुट्टामा बारबार थिचिएर रहनुपर्ने जुत्तालाई पनि त आफू शोषित–पीडित भएको लाग्दो हो नि त !
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १९, २०७६, ०२:११:००